Golaha Wasiirada Soomaaliya oo Shir u tegay Hotel ku yaalla Garoonka Diyaaradaha Aadan-Cadde - Awdinle Online
Golaha Wasiirada Soomaaliya oo Shir u tegay Hotel ku yaalla Garoonka Diyaaradaha Aadan-Cadde
Magaalada Muqdisho gaar ahaan mid kamid ah Hoteelada ku yaalla Garoonka diyaaradaha Aadan-Cadde waxaa kulan uu uga socdaa Golaha Wasiirada ee Xukuumadda federalka ah ee Soomaaliya, kulankaas oo looga hadlayo Arrimo dhowr ah.
Kulanka oo uu shir guddoominayo Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa waxaa looga hadlayaa Arrimo ay kamid yihiin, Doorashooyinka, Amniga, Kordhinta Dhaqaalaha, Daynta cafinta, horumarinta bulshada, Caddaaladda iyo Qorshaha waxqabadka Xukuumadda ee 100ka maalmood.
Xubno kamid ah Golaha Wasiirada ayaa kulanka uga warbixiyay waxyaabaha u qabsoomay iyo sida ay u daradar gelin doonaan howlaha horyaalla, sida Amniga, doorashooyinka iyo baahiyaha ay qabaan Bulshada Soomaaliyeed.
Kulanka ayaa waxaa ka soo dhex-muuqday Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, iyada oo aan si rasmi ah loo faah faahin sababaha uu kulanka uga qyeb-galayo maadaama uusan kamid aheyn Golaha Wasiirada Soomaaliya.
Previous articleFulinta Amar kasoo baxay RW Rooble oo bilaawday
Next articleCiidamo ka tirsan Maamulka Koonfur Galbeed oo toogasho lagu dilay